ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ကစ်ကစ် – Askstyle
ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ကစ်ကစ်
မတ်လ ၂၃ ရက် ညက ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ လူမှု ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ တစ်လလျှင် ရှစ်ကြိမ်ခန့် ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ကစ်ကစ်က ရောဂါဒဏ်ကို အလူးအလဲ ခံနေရတာပါ။ ဘာမှ မစားမသောက်တော့ဘဲ အိပ်ရာထဲ ဘုန်းဘုန်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကစ်ကစ်က ခုလို ပြောပါတယ်။
“ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လမ်းတွေဘာတွေ လျှောက်ပြီးတော့ အပေါ်လည်း ရောက်သွားရော ဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။ ဘာမှ စားချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ စိတ်ကကို အဲ့လိုကြီး ဖြစ်သွားပြီး မျောသွားတာ။ မျောသွားတော့ မင်းသားရဲတိုက်နဲ့ တစ်ပုံစံတည်း တူတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သွားတွေ့တယ်။
ရဲတိုက်အချောစားလေးပေါ့။ ဖြူဖွေးနေတာပဲ အသားလေးက စတစ်ကော်လာ အဖြူလေးနဲ့ ကချင်လုံချည်လေးနဲ့ အဲ့ကောင်လေးက။ အမရယ်. .ဘယ်တွေ လျှောက်သွားနေတာလဲ လျှောက်သွားမနေနဲ့ ပြန်စရာရှိတာ ပြန်တဲ့။ အချိန်တွေ လွန်ကုန်ရင် မကောင်းဘူးတဲ့။
နောက်လှည့်ပြီး ပြန်လိုက်တော့ ပြသာဒ်ကြီးတစ်ခု သွားတွေ့တယ်။ ပြသာဒ်ကြီးမှာ ပဌာန်းတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ အသံကြားရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ( ၂၀) က ဆုံးသွားတဲ့ အမေတို့ ညီမ သုံးယောက်စလုံးကို ပြသာဒ်ထဲမှာ သွားတွေ့တယ်။
အမေတို့နဲ့ စကားပြောရင်း အမေက ဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ နေမကောင်းဘူးလို့ ပြောပြီး အမေ့ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးအုံးပြီး နေနေတာ။ အမေက နီညိုရောင် ကတ္တီပါ အိတ်လေးထဲ ရွှေရောင် မန်ကျည်းစေ့တွေ အများကြီးထဲက တစ်စေ့ကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီး သွေးဆေးရောင် ထွက်လာတဲ့ ရေကို သောက်လိုက်တဲ့။ သောက်လည်းသောက်ပြီးရော အမေက သွားတော့တဲ့။ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နဲ့ ငါ့သမီး ဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်တဲ့။ ပြောလည်းပြောပြီးရော . .သမီးက ဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲ အမေရယ် မပြန်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့ ပဌာန်းသံကြားတယ် မလားတဲ့။ အဲ့အသံကြားတဲ့ နောက်ကို ပြန်တဲ့။” ဆိုပြီး ပြောပြသွားပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မကစ်ကစ်တစ်ယောက် ကျန်းမာရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီး ရယ်မောနိုင်ပါစေလို့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။
မတျလ ၂၃ ရကျ ညက ဟာသသရုပျဆောငျ ကဈကဈ ကှယျလှနျသှားပွီဆိုတဲ့ သတငျးတှေ လူမှု ကှနျရကျပျေါမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါတယျ။ ကနျြးမာရေး အခွအေနအေရ တဈလလြှငျ ရှဈကွိမျခနျ့ ကြောကျကပျဆေးနရေတဲ့ ကဈကဈက ရောဂါဒဏျကို အလူးအလဲ ခံနရေတာပါ။ ဘာမှ မစားမသောကျတော့ဘဲ အိပျရာထဲ ဘုနျးဘုနျးလဲနတေဲ့အခြိနျမှာ ကွုံဆုံခဲ့ရတဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ အဖွဈအပကျြကို ကဈကဈက ခုလို ပွောပါတယျ။
“ကိုယျ့သဘောနဲ့ကိုယျ လမျးတှဘောတှေ လြှောကျပွီးတော့ အပျေါလညျး ရောကျသှားရော ဘာဖွဈသှားလဲ မသိဘူး။ ဘာမှ စားခငျြစိတျ မရှိတော့ဘူး။ စိတျကကို အဲ့လိုကွီး ဖွဈသှားပွီး မြောသှားတာ။ မြောသှားတော့ မငျးသားရဲတိုကျနဲ့ တဈပုံစံတညျး တူတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ သှားတှတေ့ယျ။
ရဲတိုကျအခြောစားလေးပေါ့။ ဖွူဖှေးနတောပဲ အသားလေးက စတဈကျောလာ အဖွူလေးနဲ့ ကခငျြလုံခညျြလေးနဲ့ အဲ့ကောငျလေးက။ အမရယျ. .ဘယျတှေ လြှောကျသှားနတောလဲ လြှောကျသှားမနနေဲ့ ပွနျစရာရှိတာ ပွနျတဲ့။ အခြိနျတှေ လှနျကုနျရငျ မကောငျးဘူးတဲ့။
နောကျလှညျ့ပွီး ပွနျလိုကျတော့ ပွသာဒျကွီးတဈခု သှားတှတေ့ယျ။ ပွသာဒျကွီးမှာ ပဌာနျးတှေ ဖှငျ့ထားတဲ့ အသံကွားရတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ ( ၂၀) က ဆုံးသှားတဲ့ အမတေို့ ညီမ သုံးယောကျစလုံးကို ပွသာဒျထဲမှာ သှားတှတေ့ယျ။
အမတေို့နဲ့ စကားပွောရငျး အမကေ ဘာဖွဈလာတာလဲဆိုတော့ နမေကောငျးဘူးလို့ ပွောပွီး အမပေ့ေါငျပျေါ ခေါငျးအုံးအုံးပွီး နနေတော။ အမကေ နီညိုရောငျ ကတ်တီပါ အိတျလေးထဲ ရှရေောငျ မနျကညျြးစတှေ့ေ အမြားကွီးထဲက တဈစကေို့ ရနေဲ့ ဖြျောပွီး သှေးဆေးရောငျ ထှကျလာတဲ့ ရကေို သောကျလိုကျတဲ့။ သောကျလညျးသောကျပွီးရော အမကေ သှားတော့တဲ့။ ဟိုမရောကျ ဒီမရောကျနဲ့ ငါ့သမီး ဒုက်ခရောကျနဦေးမယျတဲ့။ ပွောလညျးပွောပွီးရော . .သမီးက ဘယျလိုပွနျရမှာလဲ အမရေယျ မပွနျတတျတော့ဘူးဆိုတော့ ပဌာနျးသံကွားတယျ မလားတဲ့။ အဲ့အသံကွားတဲ့ နောကျကို ပွနျတဲ့။” ဆိုပွီး ပွောပွသှားပါတယျ။
သရုပျဆောငျ မကဈကဈတဈယောကျ ကနျြးမာရေး ပွနျလညျကောငျးမှနျပွီး ရယျမောနိုငျပါစလေို့ ပရိသတျတှကေတော့ ဆုတောငျးပေးနကွေပါတယျ။